Nkwakọ ngwaahịa ịsacha na-eweta ọrụ nkwụsị nke palette site na imewe na nrụpụta. Otu ngwungwu a na-emegharị emegharị nke na-enye ndị ahịa ohere ịgwakọta ma kwekọọ ihe ndị mara mma kachasị amasị ha. Ihe: Aluminium / Igwe oyuyo: Igwe dayameta 73.9mm * Elu 22.05mm Agba: Emechaa agba agba agba: Mpempe akwụkwọ silk, igwe na-ekpo ọkụ, mkpuchi UV, igwe MOQ: 5000PCS Puru iche: Enyo, Push Button na-emepe Nhọrọ: Single, Injection Molded, Round Wells, Wet and Dry Brand Name ： OEM / ODM…
Ihe ịchọ mma efu nke na-acha nzu nzu
Nkwakọ ngwaahịa ịsacha na-eweta ọrụ nkwụsị nke palette site na imewe na nrụpụta. Otu ngwungwu a na-emegharị emegharị nke na-enye ndị ahịa ohere ịgwakọta ma kwekọọ ihe ndị mara mma kachasị amasị ha. Ihe: Alumini / Ngwurita plastik: dayameta 75.27mm * Ogo 14.35mm Agba: Emecha agba dị iche iche: Mpempe akwụkwọ silk, ikpo ọkụ, UV mkpuchi, metalization MOQ: 5000PCS Pụrụ Iche Ntugharị: Enyo, Push Button Na-emepe Nhọrọ: Single, Injection Molded, Round Wells, Wet and Dry Brand Name ： OEM / ODM…
Gburugburu rọba kọmpat ntụ ntụ
Nkwakọ ngwaahịa ịsacha na-eweta ọrụ nkwụsị nke palette site na imewe na nrụpụta. Otu ngwungwu a na-emegharị emegharị nke na-enye ndị ahịa ohere ịgwakọta ma kwekọọ ihe ndị mara mma kachasị amasị ha. Ihe: Alumini / Ngwurugwu Igwe: Oke dayameta 59.2mm * Elu 21mm Agba: Agba agba agba na-emecha: Mpempe akwụkwọ silk, stamping dị ọkụ, mkpuchi mkpuchi UV, igwe MOQ: 5000PCS Pụrụ Iche Ntugharị: Enyo, Push Button Na-emepe Nhọrọ: Single, Injection Molded, Round Wells, Wet na Dry Brand Aha ： OEM / ODM Ndekọ ...
Igbe Cushion ikuku na enyo
Nkwakọ ngwaahịa ịsacha na-eweta ọrụ nkwụsị nke palette site na imewe na nrụpụta. Otu ngwungwu a na-emegharị emegharị nke na-enye ndị ahịa ohere ịgwakọta ma kwekọọ ihe ndị mara mma kachasị amasị ha. Ihe: Aluminium / Igwe oyuyo: Igwe oyuyo 73.5mm * Ogo 20.3mm Agba: Agba mmecha iberibe: Mkpochapu silk, ihe eji ekpo oku, mkpuchi UV, metili MOQ: 5000PCS Puru iche: Enyo enyo, Push Button na-emepe nhọrọ: Single, Injection Molded, Round Wells, Wet and Dry Brand Name ： OEM / ODM L ..
Etere Mmanụ Ala Ejiri
Nkwakọ ngwaahịa ịsacha na-eweta ọrụ nkwụsị nke palette site na imewe na nrụpụta. Otu ngwungwu a na-emegharị emegharị nke na-enye ndị ahịa ohere ịgwakọta ma kwekọọ ihe ndị mara mma kachasị amasị ha. Ihe: Alumini / Ngwurita plastik: dayameta 54.25mm * Ogo 13.65mm Agba: Emecha agba dị mma: Mpempe akwụkwọ silk, stamping dị ọkụ, mkpuchi mkpuchi UV, igwe MOQ: 5000PCS Pụrụ Iche Ntugharị: Enyo, Push Button na-emepe nhọrọ Nhọrọ: Single, Injection Molded, Round Wells, Wet and Dry Brand Name ： OEM / ODM…
Nkwakọ ngwaahịa ịsacha na-eweta ọrụ nkwụsị nke palette site na imewe na nrụpụta. Otu ngwungwu a na-emegharị emegharị nke na-enye ndị ahịa ohere ịgwakọta ma kwekọọ ihe ndị mara mma kachasị amasị ha. Ihe: Aluminium / Igwe oyuyo: Igwe dayameta 73.5mm * Ogo 20.1mm Agba: Emechaa agba dị mma: Mpempe akwụkwọ silk, stamping dị ọkụ, mkpuchi UV, met MOQ: 5000PCS Puru iche: Enyo, Push Button na-emepe nhọrọ Nhọrọ: Single, Injection Molded, Round Wells, Wet and Dry Brand Name ： OEM / ODM L ..
Ntụ ntụ ntụ maka ịchọ mma
Nkwakọ ngwaahịa ịsacha na-eweta ọrụ nkwụsị nke palette site na imewe na nrụpụta. Otu ngwungwu a na-emegharị emegharị nke na-enye ndị ahịa ohere ịgwakọta ma kwekọọ ihe ndị mara mma kachasị amasị ha. Ihe: Aluminium / Igwe oyuyo: Igwe dayameta 71.6mm * Ogo 21.9mm Agba: Emecha agba dị na ya: Mpempe akwụkwọ silk, stamping dị ọkụ, mkpuchi UV, met MOQ: 5000PCS Puru iche: Enyo, Push Button na-emepe nhọrọ Nhọrọ: Single, Injection Molded, Round Wells, Wet and Dry Brand Name ： OEM / ODM L ..
Nkwakọ ngwaahịa ntụ ntụ
Nkwakọ ngwaahịa ịsacha na-eweta ọrụ nkwụsị nke palette site na imewe na nrụpụta. Otu ngwungwu a na-emegharị emegharị nke na-enye ndị ahịa ohere ịgwakọta ma kwekọọ ihe ndị mara mma kachasị amasị ha. Ihe: Alumini / Ngwurita plastik: dayameta 50mm * Elu 11.8mm Agba: Agba agba agba na-emecha: Mpempe akwụkwọ silk, stamping dị ọkụ, mkpuchi mkpuchi UV, igwe MOQ: 5000PCS Pụrụ Iche Ntugharị: Enyo, Push Button Na-emepe Nhọrọ: Single, Injection Molded, Round Wells, Wet na Dry Brand Aha ： OEM / ODM Ndekọ ...
Ngwakọta ntụ ntụ kọmpat
Efu efu ntụ ntụ
Nkwakọ ngwaahịa ịsacha na-eweta ọrụ nkwụsị nke palette site na imewe na nrụpụta. Otu ngwungwu a na-emegharị emegharị nke na-enye ndị ahịa ohere ịgwakọta ma kwekọọ ihe ndị mara mma kachasị amasị ha. Ihe: Alumini / Ngwurita plastik: dayameta 59.5mm * Height 14.4mm Agba: Agba agba agba na-emecha: Mpempe akwụkwọ silk, stamping na-ekpo ọkụ, mkpuchi UV, met MOQ: 5000PCS Pụrụ Iche Ntugharị: Enyo, Push Button na-emepe nhọrọ Nhọrọ: Single, Injection Molded, Round Wells, Wet and Dry Brand Name ： OEM / ODM L ..